Waayaha Gawaarida Dukaamada casriga ah | Duoduo
Waqtiga Gawaarida Gawaarida Casriga ah
Iyadoo la horumarinayo tikniyoolajiyadda sirdoonka macmalka ah iyo isbeddelada cusub ee warshadaha tafaariiqda, shirkado badan ayaa bilaabay inay horumariyaan ama adeegsadaan gawaarida casriga ah ee wax iibsiga. In kasta oo gawaarida casriga ah ee casriga ahi ay leeyihiin faa'iidooyin badan oo codsi ah, waxay sidoo kale u baahan tahay inay fiiro gaar ah u yeelato arrimaha gaarka ah iyo arrimaha kale.
Sanadihii la soo dhaafay, teknoolojiyada macluumaadka jiilka cusub sida sirdoonka macmalka ah iyo Internet-ka Waxyaabaha ayaa si deg deg ah ku soo kordhay, qaababka cusub ee dhaqaalaha sida ganacsiga e-commerce ayaa sii waday inay sii kordhaan, taasoo horseedeysa isbedelada warshadaha badan. Hadda, si loola socdo isbeddelada cusub ee suuqa isla markaana macaamiisha loogu siiyo adeegyo ka sii wanaagsan, shirkado badan ayaa bilaabay inay adeegsadaan barashada qoto dheer, bayoolajiyada, aragtida mashiinka, dareemayaasha iyo teknoolojiyada kale si ay u horumariyaan gawaarida casriga ah ee wax iibsiga.
Walmart Cart Shopping Cart
Maaddaama ay tahay shirkad caalami ah oo tafaariiq ah, Wal-Mart wuxuu muhiimad weyn siinayaa dhiirrigelinta casriyeynta adeegga iyada oo loo marayo tikniyoolajiyadda. Horaantii, Walmart waxay codsatay patent-ga gawaarida casriga ah. Marka loo eego shatiga, Walmart Smart Shopping Cart wuxuu la socon karaa garaaca wadnaha macaamilka iyo heerkulka jirka waqtiga dhabta ah, iyo sidoo kale xoogga haysashada iskutallaabta gawaarida wax iibsiga, waqtiga qabashada hore, iyo xitaa xawaaraha gaadhigii dukaamaysiga.
Wal-Mart wuxuu rumeysan yahay in marka gawaarida wax iibsiga casriga ah la isticmaalo, ay macaamiisha u keeni doonto khibrad adeeg oo ka wanaagsan. Tusaale ahaan, iyada oo ku saleysan macluumaadka jawaab celinta ee dukaanka casriga ah, Wal-Mart ayaa u diri kara shaqaalaha si ay u caawiyaan waayeelka ama bukaannada laga yaabo inay dhibaato ku jiraan. Intaas waxaa sii dheer, gaadhigii wax iibsanayey wuxuu kaloo ku xirnaan karaa APP caqli badan si loola socdo isticmaalka kalooriga iyo xogta kale ee caafimaadka.
Waqtigaan la joogo, Gawaarida wax iibsiga ee casriga ah ee Volvo wali waxay ku jiraan marxaladda lahaanshaha. Haddii ay mustaqbalka soo gasho suuqa, waxaa laga filayaa inay faa iido u leedahay ganacsigeeda suuqgeynta. Si kastaba ha noqotee, dadka u dhuun daloola arrimaha warshadaha ayaa sheegay in garaashka dukaamaysiga casriga ahi u baahan yahay inuu uruuriyo xog badan, taas oo horseedi karta in si aan loo baahnayn loo muujiyo sirta ah, ka dibna loo baahan yahay in la sameeyo ilaalinta amniga macluumaadka
Bakhaarka Casriga ah ee Waaxda Adduunka Cusub
Wal-Mart ka sokow, E-Mart, silsilad weyn oo qiimo dhimis ah oo ay leedahay tafaariiqleyda Kuuriyada Koonfureed ee New World Store, ayaa sidoo kale soo saartay gaari wax iibiya oo xariif ah, kaas oo bilaabi doona hawlgal tijaabo ah mustaqbalka dhow si kor loogu qaado tartanka khadka toosan ee shirkadda. kanaalada qaybinta.
Sida laga soo xigtay E-Mart, gaariga wax iibsiga ee casriga ah waxaa loo yaqaan "eli", labo ka mid ahna waxaa la geyn doonaa supermarket u eg bakhaar ku yaal koonfurta-bari Seoul halkaas oo lagu soo bandhigayo afar maalmood. Iyada oo gacan laga helayo nidaamka aqoonsiga, gaariga wax iibsiga ee caqliga leh si toos ah ayuu ula socon karaa macaamiisha wuxuuna ka caawin karaa iyaga inay doortaan alaabada. Isla mar ahaantaana, macaamiisha sidoo kale waxay si toos ah ugu bixin karaan kaarka deynta ama lacag-bixinta moobiilka, iyo gawaarida wax iibsiga ee caqliga leh ayaa si iskiis ah u go'aamin kara in alaabada oo dhan la bixiyay iyo in kale.
Si ka duwan Wal-Mart iyo Bakhaarka Waaxda Cusub ee Adduunka, Chao Hei waa shirkad cilmi baaris iyo horumarineed si ay u horumariso gawaarida casriga ah ee wax iibsashada. Waxaa lagu soo warramey in Super Hi gaariga wax iibsiga ee casriga ah, oo diiradda saaraya dejinta is-adeegsiga, uu adeegsado teknoolojiyada sida aragtida mashiinka, dareemayaasha, iyo barashada qotada dheer si looga caawiyo xallinta dhibaatada safafka dhaadheer ee dukaanka.
Shirkadda ayaa sheegtay in xilligan, ka dib dhowr sano oo cilmi-baaris iyo horumarin iyo soo noqnoqosho ah, gaadhigeeda casriga ah ee wax iibsada ay hore u aqoonsan karto 100,000 + SKU oo ay ku samayn karto dhiirrigelin ballaadhan. Haatan, Super Hi Smart Shopping Cart waxaa laga bilaabay dhowr dukaanno Wumart ah oo ku yaal Beijing, wuxuuna leeyahay mashruucyo uu ku dego Shaanxi, Henan, Sichuan iyo meelo kale iyo sidoo kale Japan.
Gawaarida wax iibsiga casriga ah ayaa ah Weyn
Dabcan, maahan oo kaliya shirkadahaani kuwa soo saara gawaarida casriga ah. Iyada oo ay ku xiran tahay kor u kaca sirdoonka macmalka ah iyo tafaariiqda cusub, waxaa la filayaa in suuqyo badan oo waaweyn iyo suuqyada wax lagu iibiyo ay soo bandhigi doonaan alaabada gawaarida casriga ah ee mustaqbalka, taas oo dardar galinaysa xaqiijinta ganacsiga, daaranaya badweynta weyn ee buluugga ah, iyo abuuritaanka baaxad weyn suuqa.
Shirkadaha tafaariiqda, codsiga gawaarida casriga ah ee wax iibsiga shaki la'aan waxay noqon doontaa faa'iido weyn. Ugu horreyn, gawaarida casriga ah ee lafdhabarta ah lafteeda waa fikrad wanaagsan oo caan ah oo u horseedi karta shirkadda faa'iido xayaysiin ah; tan labaad, gaariga wax iibsiga ee caqliga leh ayaa macaamiisha u keeni kara khibrad wax soo iibsi oo cusub isla markaana kordhin kara nafwaayaha isticmaalaha; markale, gaariga wax iibsiga ee caqliga badan wuxuu ka heli karaa fure aad u fara badan xogta shirkadda waxay ku habboon tahay isku-duwidda kheyraadka kala duwan, yareynta kharashyada hawlgalka, iyo kordhinta faa'iidada ganacsi. Ugu dambeyntiina, Gawaarida wax iibsiga ee caqliga leh ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa madal xayeysiin ah, taas oo kaliya aan si dhow ula xiriiri karin macaamiisha, laakiin sidoo kale u keeni karta dakhli dheeri ah shirkadaha.
Isku soo wada duuboo, cilmi baarista iyo horumarinta gawaarida wax iibsiga ee caqliga badan ayaa noqotay mid qaan gaar ah, waxaana sidoo kale la filayaa codsi suuq ballaaran. Laga yaabee inaysan waqti dheer nagu qaadan doonin inaan kulano gawaaridan casriga ah ee dukaamada waaweyn iyo suuqyada wax lagu iibiyo, ka dib waxaan awoodi doonnaa inaan la kulanno khibrad adeegsi smart.